> Resource > Video > Sida loo Beddelaan PowerPoint in AVI Video
Beddelaan PowerPoint in AVI video idiinka keeno badan oo ka mid ah faa'iidooyinka. Waxay kaa caawin karaan inaad la ciyaari bogagga on kombuyuutarrada gacanta sida iPod, iPhone, casriga ah HTC ama wadaagaan PowerPoint videos in YouTube, Facebook, ama blog ay muujiyaan abuurkiinna ama sharax fikradaha. Haddii aad raadineyso weeyna barnaamij kaas oo taageera diinta PowerPoint in AVI, waan hubaa PPT2Video Pro waa doorasho wanaagsan. Waa barnaamij si sahlan loo isticmaalo iyo xirfadeed kaas oo awood kuu si loogu badalo PowerPoint si loo jecel yahay kala duwan qaabab video dadaal lahayn. Halkan aan aragno sida loo badalo PowerPoint in AVI Video la software this.
1 Ku rakib PPT2Video Pro iyo Import PPT Files
Download iyo rakibi version tijaabo ah ugu horeysay PPT2Video Pro ka dibna riix "Abuur Video Faylal ay" si ay u galaan interface ugu weyn. Ka dib markii in, riix "Add" badhanka si ay u geliyaan files PPT si PPT si Converter AVI. Si reorder PPT files, file jiita PPT ama riix badhanka "dhaqaaq Up" ama "dhaqaaq Down"
2 Settings Output Calan
On the interface "Settings", dooran AVI sida qaab wax soo saarka ee liiska qaab hoos-hoos u. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari videos diirada ku saabsan qalabka, si toos ah u doortaan qalabka sida qaab wax soo saarka. Goobaha default Kuwan waxaa horay filaayo.
Software Tani waxay sidoo kale ku siin Settings Advanced oo aad u adeegsan kartaa. Just guji "Settings Advanced" u profile, audio iyo video-beegyada uu ku Profile interface pop-up ah. Halkan waxa aad sameyn kartaa tayada video iyo luqadda, geliso background image, dooran size video iyo dar jeeda music oo taariikhqorihii dhawaaqa. Dhammaan waxay ka dhigi kartaa video xirfad dheeraad ah.
3 bilow si loogu badalo PPT si AVI
Ka dib dejinta macluumaad wax soo saarka, tag "Dhoofinta" interface, caga dhigay oo ku dhufatey "Start" button in hawshan ay u dhammeeyaan oo dhan ee labaad dhawr. Markii diinta lagu sameeyo, guji si aad u eegto files AVI ee folder cayimay. Markaas waxaad gali kartaa video in ay goobaha video qaybsiga, ama waxay isla markiiba ciyaaro TV.